Uvimba woPhulo-amaLungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
22 Ngamana 2016
Iphulo: Yeka uRhwebo lweArms!
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 22. Meyi 2016
Misa iphulo lezorhwebo
Umndeni we-Oetker ulungele
Ngoxa i-Bundeswehr ishukuthela eSiriya ukulwa ne-ISIS kwaye ihlabathi liloyiko lokuhlaselwa kwamaphekula kwiimarike zeKrisimesi, izityebi zaseJamani zifaka imali kwiinkampani zokhuseleko. Kungekudala, abanye abanini-nxaxheba baDkt. Ing. U-Oetker KG u-Agasti ubandakanyeka ekufunyeneni kwe-ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, iindawo zezo shishino zibandakanya iJets fighter jets. Icandelo lezokhuselo ngamanye amaxesha inzima yenkalo yotyalo-mali. Nangona iimarike ziyakuthi zikhuselekiswe ubuncinane ngeendlela ezininzi zokuthumela ngaphandle kweempahla kunye ne-Bundeswehr, kodwa ekuthiwa ishishini lokukhusela liphinde lininzi neentonga zegazi.
Sebenzisa ubugcisa bokukhanya ukutshaya umlilo
I-PixelHELPER ibeke iinjongo kwixesha eliphumayo le-Advent ukubonisa lo utsalo-mali lwe-Oetker yentsapho. Ngoko ukuba kwixesha elidlulileyo leKrismesi xa kuthengwa izithako zekhikikhi zeKrismesi kungekhona lo myalezo omncinci uxolo, u-Bienkowski uye waqalisa imibhikisho eyahlukeneyo. Ngokomzekelo, umculi wokukhanya wenzelwe uDkt. I-logo ye-Oetker kwifom ekhuselekile kunye nesayineli "Kanonenfutter" kwi-facade yenkampani kaDkt. Med. Oetker e Bielefeld. Kusenokwenzeka ukuba kube nje ukukhanya okukhawuleza kwimbane yasebusuku yaseBielefeld, ekhanyisa izitalato ezityebileyo, kodwa nantsi ingakumbi malunga neendaba. Kwaye kanye kanye nale ngqiqo uBienkowski uvavanywa kwiSlingshot Channel eyaziwayo kwi-YouTube kunye neJörg Sprave ikhonkco ye-pudding eyenziwe ngokwabo.
Imfa njengento yangasese
Yaye yintoni eyenzekayo yonke le nto? Emva koko, kwakukho isitatimende esisemthethweni seenkampani yaseBielefeld okwangoku. "Utyalo-mali yingxelo yabucala yabamalungu amabini entsapho kwaye ayinanto enxulumene nenkampani. Oetker ", ngokubhekisela kwiphephandaba le-Neue Westfälische Zeitung. Kwaye u-Bienkowski waletha isiteleka esilandelayo malunga nentsapho yaseOetker ukuze ifikelele isazela sabo. Umbuzo wokuba ingaba ngumnikazi wekampani kaDkt. Med. U-Oetker usezibambini zoshishino ukuba zibandakanyeke, eli lixesha liyi-sugar sugar elimnandi kwaye lingenakulungiswa yiBer Boys Boys.
Ngaba ukuziphatha kungaba nzima ngaphezu kwepyzza yakho efriziwe?
Ngendlela uRolf Zuckowski's backhit "In der Weihnachtsbäckerei" ngokukhawuleza yaba yinto ebalulekileyo ekuhlaleni. Abantwana babuza umndeni wakwa-Oetker: "Uhlala phi na ukuziphatha?" Isenzo esithintelayo senziwa kunye ne-Berlin hip hop umculi waseVokalmatador. Kodwa kungekhona nje ngohlobo lwezwi kunye nomxholo, ukubonakala kubaninzi kunikezela, isiteji sinye. Ngamahagi ehagu phambi kwebhokisi le-1,45 yamitha ende yeebhokisi. Kule mihla engenakonakalisa, ubuncinci uRichard Oetker kufuneka adlule uvuyo lwezopolitiko zoshishino. Emva koko konke oku, i-1976 yaxhunjwa kwibhokisi kwaye igcinwe. Umqwenguli wayephethe i-pig mask. Ingaba isenzo esingenakulungiswa? Ngokuqinisekileyo. Kodwa zingaphi iindidi ezilungele ukulungele ukulibala lakho ixesha elidlulileyo kwaye utyalomali kwiingxoxo zeengalo eziye zaphantse zakubulala malunga ne-40 kwiminyaka edlulileyo?
Ukuze yokumisa nangoko ezithunyelwa itanki Saudi Arabia ipixels Mncedi eqikelelwayo yintsebenziswano kunye isikhalo Action - Misa urhwebo ngeengalo, i "Enkosi akukho amatanki ku Saudi Arabia" amagama Federal Chancellery kunye Embassy of Saudi Arabia.
I Saudis zisekhona phakathi abathengi ibalulekileyo iinkampani iingalo German. Kwisiqingatha sokuqala iingalo 2015 kwamanye amazwe ziye zavunywa ixabisa malunga nezigidi 180 euro to Saudi Arabia - neBritani noSirayeli nokuba ishishini omkhulu.
IJamani i-Europe ibambelele kwiingalo zokuthumela ngaphandle. Ehlabathini lonke, kuthatha indawo yesithathu emva kwe-US neRashiya. Ngokuvunyelwa nguRhulumente, izixhobo zaseJamani kunye nezixhobo zinikezelwa nolawulo lwezolawulo kunye nolawulo olusemthethweni olunjenge-Saudi Arabia. Oku akukwazi ukuqhubeka njengaye. Sifuna ukuphelisa ishishini ngokufa.
Iphulo: Yeka uRhwebo lweArms! Julayi 1st, 2019Oliver Bienkowski